Shaja kabusha iselula ye-BBVA ngokushesha, elula futhi evikelekile - Shaja kabusha iselula
Manje usungakwazi ukushaja kabusha iselula yakho nge- Iwebhusayithi esemthethweni ye-BBVA, ukufinyelela ngenombolo yakho yomsebenzisi nephasiwedi. Bese ukhetha opharetha weselula, i-akhawunti yasebhange lapho inani kanye nenani kuzoncishiswa. Kulula kanjalo ukushajwa kabusha umakhalekhukhwini we-BBVA usendaweni enethezekile noma ehhovisi lakho.
I-BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) iyibhange laseSpain elinekomkhulu eliseBilbao. Iphakathi kwezikhungo zezezimali ezihamba phambili emhlabeni futhi nakuba ikhona ikakhulukazi eSpain, iphinde yasungulwa eMexico, e-United States, eColombia, eVenezuela naseTurkey.
Shaja kabusha i-BBVA mobile ngokusebenzisa ibhange ngocingo
Ukubhanga ngocingo kwe-BBVA kukuvumela ukuthi ushaje kabusha iselula yakho, ngaphezu kweminye imisebenzi nokubonisana ngocingo, ngendlela esheshayo nelula. Ukuze ufinyelele isevisi, shayela ulayini we-BBVA 91 224 94 26
Uma ungeyena umsebenzisi webhange ngocingo, ungabhalisa ocingweni lwakho lokuqala. Kufanele ube namakhadi e-BBVA eduze, njengoba azokubuza idatha. Ungasebenzisa amagama-mbumbulu owamisile kumikhiqizo yakho ye-bbva.es ukusheshisa inqubo.
Uma usubhalisiwe ebhange locingo, shayela isevisi futhi uziveze nge-ID yakho. Tshela opharetha ukuthi ufuna ukushajwa kabusha iselula yakho. Ungaphinda ushaje omakhalekhukhwini be-BBVA abavela ohlwini lwakho loxhumana nabo.
Bazokucela izindawo ezimbili ezingahleliwe zekhodi yakho yokufinyelela njengendlela yokuphepha ukuze ukwazi ukuyicubungula. Kwezinye izimo futhi njengesinyathelo sokuphepha, isistimu izokuthumela iphasiwedi nge-SMS kumakhalekhukhwini wakho. Kufanele unikeze le phasiwedi ku-opharetha okusizayo ukuthi akuqinisekise njengekhasimende le-BBVA.
Ukubhanga ngocingo kukunikeza ithuba lokushajwa kabusha iselula yakho ngokushesha nakalula. Ngokubhanga ngocingo, ungenza neminye imibuzo nokusebenza ku-akhawunti yakho nge-BBVA, isibonelo, hlola ibhalansi ye-akhawunti yakho, amakhadi esikweletu, ukudlulisa phakathi kwama-akhawunti, njll.
Shaja kabusha iselula yakho ngohlelo lokusebenza lwe-BBVA Wallet
I-BBVA ifake olwayo uhlelo lokusebenza ukuze amakhasimende akwazi ukusebenza ngamakhadi awo ngendlela eshesha kakhulu futhi ekhululekile. Kulolu hlelo lokusebenza ungashaja kabusha iselula yakho ye-BBVA ngokushesha, ngaphandle kokuthi uye ehhovisi noma kumphathi wewebhu.
Ngaphezu kwalokho, ngohlelo lokusebenza lwe-BBVA Wallet ungenza eminye imisebenzi yasebhange njengokuqasha ikhadi elisha lesikweletu noma ukukhansela eselivele likhona, thintana ne-CVV online, ufake imali ekhadini, njll. Uhlelo lokusebenza lwe-BBVA Wallet lukhululekile ngokuphelele futhi iyatholakala ku-iOS nezinhlelo zokusebenza ze-Android. Ungayilanda ku-App Store naku-Google Play.
Phezulu kuselula » Amabhange » Shaja kabusha i-BBVA yeselula
Amazwana angu-1 kokuthi "Shaja kabusha iselula ye-BBVA"
Okthoba 22, 2019 ku-1: 10 am
Ngifuna amadola angu-5 wokushajwa kabusha